ख्याल गर्नुस्, फेसबुकमार्फत् ठगिनुहोला! - Open Khabar - नेपाली अनलाइन डिजिटल पत्रिका
ख्याल गर्नुस्, फेसबुकमार्फत् ठगिनुहोला!
बागलुङ, गत असोज ६ गते मध्याह्नपख ढोरपाटन नगरपालिका–६ की मीना बुढामगर र ‘डोनल्ड किन्ले’ नामको फेसबुक प्रयोगकर्ताबीच म्यासेन्जरमा कुराकानी हुन्छ।
सम्बन्धित जिल्लामा रहेका प्रहरी कार्यालय/एकाइसँगको समन्वयमा खोजतलास गरी प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगीका घटना बढेको भन्दै प्रउ श्रेष्ठले आम नागरिक सचेत हुन जरुरी रहेको बताए। उनले त्यस्ता कुनै शङ्कास्पद घटना भएमा तुरुन्त प्रहरीकहाँ आउन सुझाव दिएका छन्।